Izithonjana zebhodlela lezimonyo - China Abakhiqizi bamabhodlela abakhiqizi, abahlinzeki
Izimonyo zokuhamba eziyi-100ml zifakwa emabhodleleni
Iziqukathi ezinhle ze-chic zezimonyo
Ibhodlela Lesitsha Esingenalutho Esingagcwaliseki Emvelweni
Ilungele ukusampula noma ukugcina izithunzi zamehlo, izimonyo, okhilimu nezinye izimonyo.
Ukusebenza kahle kokufaka uphawu, ukuphepha namazinga ekhwalithi.
Ukhilimu opholile ongu-100ml ufakwa ebhodleleni ngokwehlukana
Ilungele okhilimu, ama-lotion, izimpushana namafutha okugcoba.
Amabhodlela anombuthano wesiliva omuhle, osezingeni eliphezulu, nenhle.
Yenziwe ngebanga lokudla le-polypropylene plastic (BPA-Free)
Ilungele ukuhamba, futhi ilingana kahle esikhwameni sakho.
Ingilazi engcolisiwe ibhodlela lamafutha elibalulekile 10 ml 20 ml 30 ml 50 ml
Lo mkhiqizo usekela: isikrini sikasilika, ukunyathela okushisayo, ukubanda, ukufafaza, ukucubungula okungenhla kudinga ukuthi ikhasimende linikeze umbhalo wesandla wokuklama, isikhathi sokulethwa izinsuku eziyi-7-10, amaphutha amancane, umehluko wombala, njll. Akunakugwenywa, sicela uxhumane nekhasimende service ukuthola imininingwane
Ingilazi ibhodlela lezimonyo ibhodlela lamafutha 20 ml 30 ml 50 ml 100 ml
Cindezela / Spray Ukukhetha okuhle ekhaya, kukhona izifonyo ezimbili zokucindezela.
Ingilazi engenalutho esebenzelana nemvelo yenza kube lula ukuyisebenzisa.
Ikhava lepulasitiki elingamamitha ayi-50ml ubisi olufriziwe lungafakwa ebhodleleni ngokwehlukana
【IKHwalithi EPHAKEME】 Yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, eziqinile neziphathekayo, eziphephile nezinempilo, eziguquguqukayo futhi ezingasindi, ukonga isikhala, ukuphinda kusetshenziswe, kulula ukuyisebenzisa nokufaka.
ST UKUGCINWA KWE-SMART size Usayizi ophelele uyenza ifaneleke isikhala esincanyana noma ikona legumbi. Ingakwazi ukuhlunga izinto zakho eziwuketshezi ukuze zigcinwe kalula futhi zisetshenziswe futhi zigcine indlu yakho ihlanzekile futhi iqoqekile.
UKUSETSHENZISWA KWE-VERSATILE】 Kufanele amakha, isibulala-magciwane, umuthi, utshwala nezinye izinto eziwuketshezi. Khipha ngempumelelo iziphuzo zokuhlunga nezisebenziseka kalula.
【Iyaphatheka futhi iyasebenziseka A Ifanelekile ngosayizi futhi kulula ukuyiphatha. Ingasetshenziselwa uhambo lwangaphandle ukugcina nokugcina izinto eziwuketshezi ofuna ukuziphatha.
Ubisi lwe-50ml luhamba ngamabhodlela
50ml Sula ubisi oluyisikwele lufakwa ebhodleleni ngokwehlukana
100ml Hlukanisa ukhilimu ube ngamabhodlela
10-15ml Hlukanisa ukhilimu ube ngamabhodlela
Amanzi nobisi angama-150ml afakwa ngamabhodlela ngokwehlukana
25 ~ 50ml Imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba ifakwe emabhodleleni ngokwahlukana
Ibhodlela lengilazi le-500ml Sula i-sanitizer yesandla